कैलाशको कुटी: १ मिनेटको बहानामा उत्सब
१ मिनेटको बहानामा उत्सब
'पुरै १ मिनेट किन बढाएको? १ मिनेटमा यहाँ एउटा फिल्म बन्छ।' वाफरे १ मिनेटको पनि यत्रो महत्व?
राष्ट्रिय सभा गृह हलभित्र १३ डिसेम्बर साँझ 'The Devotion of Matthieu Ricard' (67 min, Netherlands, 2008)फिल्म हेर्न छिर्यौँ हामी। ६७ मिनेटको फिल्मलाई साथी (सागर)ले ६८ मिनेट भनेर पढेपछि छेवैको अर्को साथीले यस्तो प्रतिक्रिया दियो । भर्खरै 7th Kathmandu International Film Festival (KIMFF) 2009 सकियो। त्यही फेस्टिभलको फिल्म हेर्दाहेर्दैको प्रसंग थियो यो। समयको हिसाब गर्दा ४ मिनेट २० सेकेण्ड देखि १०८ मिनेटसम्मको फिल्म थिए त्यहाँ । खैर, यो टाँसोमा उक्त फेष्टिभलको हैन, 1 Minute Documentary Film Fest को कुरा राख्छु। Documentary for Social Transformation (DOST)ले उक्त फेष्टिभलको आयोजना गर्यो। समूहमा सचिन, सागर, रुख, श्रीधर, जानुका, रुपलगायतका साथीहरु सक्रिय रहे।
साथीहरुलाई १ मिनेटवाला फेष्टिभलको रन्को चढेको थियो सभा गृहमा फिल्म हेरिरहँदा। केही नयाँ, केही चुनौतिपूर्ण रमाइलोपनाको खोजीमा रमाउने र आ-आफ्नै क्षेत्रमा सक्रिय रहेका युवा साथीहरुले यो फेष्टिभल गर्ने विचार फुर्‍याउँदा म आफैसँग घोत्लिएको थिए। कस्तो चाहिँ होला है? परिक्षण र सिकाइको रुपमा लिएर जाने निधो गरे साथीहरुले। भन्दैथिए साथीहरु, यो फेष्टिभलमा रुचि भएकाहरु जो पनि बोर्ड मेम्बर, जो पनि फिल्म मेकर र जो पनि दर्शक तथा विश्लेषक बन्ने हो, तर फिल्मको कन्टेन्ट १ मिनेटभन्दा धेरै हुनुहुन्न। त्यो भन्दा कम भए नि हुन्छ। यसमा सबैको सहमति भयो र फेस्टिभल गर्ने दिन जुर्यो- १७ डिसेम्बर। फिल्म फेष्टिभलको लागि मार्टिन चौतारीले जम्मा हुने थलो र फिल्म स्क्रिनिङको निशुल्क जोहो गरिदियो । फेस्टिभलको लागि जुटेका साथीहरु यो experimental work हो let's see भन्ने जोशमा थिए। अन्य धेरैलाई अनौठो लाग्यो। केहीलाई भने पत्यारै लागेन।
मात्रै १ मिनेटको डकुमेन्टी? लौ कसरी? जानकारी पाएपछि धेरैले यसबारेमा सोधखोज गरे। उपत्यकाभित्र र बाहिरबाट मात्र हैन देश बाहिरबाट पनि इमेलमार्फत साधेनी भएको थियो। फिल्म या डकुमेन्टी बन्नलाई कुन कुन कुरा जरुरी छ, कुन कुन पक्षको संयोजन हुनुपर्छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान नदिइकन, कुनैपनि खालको औपचारिक प्रक्रियामा नछिरिकन, आफूसँग भएको प्रविधिसँग खेल्दै खुबी प्रदर्शन गर्ने र रुचिकर सिकारु तथा पोख्त भइसकेकाहरुलाई समेत मात्रै १ मिनेटको फिल्म मेकिङद्वारा सानो जमघट हुने मौका मिल्यो। जम्मा २४ वटा डकुमेन्टी फिल्म प्रदर्शन भए। दर्शकहरु पनि जिज्ञासु भावमा थुप्रै संख्यामा उपस्थित भए।
अब लागौ २४ वटा फिल्मतिर। रुप कुमार विकेको 'Das Deusi'ले जर्मनी भाषामा देउसी खेलेर जर्मनीतिरै जाने युवाहरु इच्छा व्यक्त गरेको थियो। विकेकानुसार Das भनेको जर्मनीमा the हो। तर एकजना दर्शकले फिल्म हेरेपछि भने 'देउसी पनि दास बनेछ'। सचिन घिमिरेको छुवाछुतसम्बन्धी 'लाज नभएको मान्छे' र जर्मनमा रामकृष्ण भजन गाएर हिडेको रमाइलो 'Ramkrishne in Germany'को दृश्यकथा हो। खेलकुद र खानाको प्रभाव पढाईमा पनि पर्छ भन्ने
सन्देश लिएर 'बालबालिकाहरुमा खेलकुद र खानाले पार्ने प्रभाव' मार्फत् १३ वर्षे अभिनाश अर्याल आए। परम्परागत नेपाली समाजमा एउटा घर, परिवार, अन्नबाली, पशुपंक्षी, बाटोघाटो भए जीवन सम्पन्न हुन्छ भन्दै 'The Rich' लिएर विश्व दर्शन नेपाल देखा परे। त्रिविको केन्द्रिय पुस्तकालय छेउ भाँडा माझेर गुजारा गर्ने बालकको कथा 'To Whom it May Concern'मा समेटेर प्रकाश लुईटेलले सटिक व्यङ्ग गरे। समीर कुमार जोशीले लागू पदार्थ प्रयोगकर्ताको नियतिलाई 'मन्द विषको गुलाम'मा कैद गरेका छन्।
उज्जवल ढुंगानाको 'हामी: Barbarism'ले निर्ममतापूर्वक पशु काट्ने/मार्ने र खाने हामी मानवको स्वभाव र परम्परालाई उनेको छ। यो फिल्ममा देखाइएको दृश्यले दर्शक, फिल्म मेकर र आयोजकबीच Film Making ethics बारे बहस समेत चलायो। सवारी दुर्घटनासम्बन्धी प्रतिकार कार्की र कला पौडेलको 'जोशमा गुमाएको होस्‌', १० वर्षिया ऋद्धिका थापाले आफ्नो वरपरका दृश्यलाई 'My Eye' शीर्षकको Photometry मा सजाए। त्यस्तैगरी श्रीधर न्यौपानेको 'त्रास' र 'Torture' गणेश थापा- जर्ज दाईको 'जब' र '?', रघुबर नेपालको 'Towards' र 'भोटे दाईको डोको', अभिनाश विक्रम शाहको
'Memories ofaSparrow', दिपेश घिमिरेको 'निरन्तर', प्रताप अधिकारीको 'क्लाइमेट चेन्ज इन नेपाल', शिवशरण कोइरालाको 'मेरो कथा', विकास प्रधानको 'One heart One people', राजेन्द्र महर्जनको 'स्कूलपेटी छेउ' नामक नेपाली डकुमेन्ट्री फिल्महरु प्रदर्शन भए। भारतका २ वटा 'Dhannobiti' (Ayesha Maria Mualla, India) र 'General Compartment' (Shilpi Gulati and Sharanya Gautam, India)नामक डकुमेन्ट्री पनि प्रदर्शन भए।
फिल्म प्रदर्शन र छलफलपश्चात मार्टिन चौतारीमा फिल्मसम्बन्धी अनुसन्धानरत अनुभव अजीतले आफ्नो छोटो विश्लेषणात्मक विचार राखे। युवाहरुको जमातले यही फेष्टिभलमा अर्को एउटा प्रदर्शन पनि गरे- कला प्रदर्शन। मार्टिन चौतारीको बगैचाभरि ठेचोका ५ जना युवा कलाकारहरुको विविध चित्रहरु राखिएको थियो। ती चित्रहरु मनमोहक र सुन्दर थिए। साँच्चै एउटा रचनात्मक उत्सब नै भयो।
अब फेरी फिल्मकै कुरातर्फ लागौ। मार्टिन चौतारीको हल दर्शकले खचाखच भरिएको थियो। प्रत्येक फिल्म हेर्दा एक खालको विषयवस्तु र मनोरञ्जन त छँदैथियो। फिल्म हेरिसकेपछिको अन्तरक्रियामा दर्शक र फिल्म मेकर दुबैको दृष्टिकोण पनि उजागर भयो। केही डकुमेन्ट्रीले १ मिनेटको समयावधिमा देखाउँन खोजेको कुरा स्पष्टसँग देखाएको थियो भने केहीले विषयको थालनी मात्रै गरेझैँ लाग्थ्यो। तैपनि १ मिनेटको डकुमेन्ट्री कस्तो हुँदो हो? भन्ने जिज्ञासालाई यो फेष्टिभलले परिपूर्ति गर्यो। प्रत्येक फिल्म सकेपछि बीचबीचमा भएको मत मतान्तर र भिन्न भिन्न दृष्टिकोणले उपस्थित दर्शक र फिल्म मेकर अनि DOST समूहलाई समेत एउटा पाठ भयो।
फिल्म मेकर १० वर्षे ऋद्धिका थापा, १३ वर्षे अभिनाश अर्याल, संसारकै छोटो फिल्म 'त्रास', नेपालमा बनेको जर्मनी फिल्म 'Das Deusi' र नेपालीले बनाएको जर्मनी फिल्म 'Ramkrishne in Germani'लगायतका कुरालाई लिएर DOST समूह फुरुङ्ग थियो। साथै फेष्टिभल सम्पन्न भएपछि १ मिनेटको फिल्म फेष्टिभलको मर्म मर्न नदिने हौसला प्रदान भएको अनुभव गर्दै उत्साहित पनि देखिए। केही नयाँपन, केही फरक स्वादको खोजीमा रहेका युवाहरुको स्वतस्फुर्त एउटा प्रयास हो यो फेष्टिभल। जुन खर्चको हिसाबले किफायती र पूर्ण रुपमा व्यक्तिको रुचि र तत्परतामा भर पर्ने सामूहिक कार्यको नमूना मान्न सकिन्छ।
यो फेष्टिभलको निरन्तरता हुने नहुने, यसले कुन रुपधारण गर्ने या नगर्ने भन्ने जस्ता आगामी कुनै योजना छैन। तर फेष्टिभल सम्पन्न भइसकेपछि DOST का साथीहरु थप उत्साहित भएको पाए। नाम कहलिएका, सबैले मानेका र धेरै खर्चमा सम्पन्न हुने त्यस्ता फेस्टिभलका सामुन्ने यो फेस्टिभलको ठाउँ कही नहरला। तर १ मिनेटको डकुमेन्ट्री बनाउँनु आफैमा निकै नै अप्ठ्यारो र साँघुरो काम हो। सबै अवस्थामा लागू नभएपनि आफूले भन्न या लेख्न खोजेको कुरा ६० शब्दमा प्रष्ट भन्नु र १ मिनेटमा एउटा कथावस्तु समेट्नु खँदिलो सृजना गर्नु हो। कतिपय अवस्थामा दबाबपूर्ण कार्य पनि हुन जान्छ सायद। यस्ता सृजना सबैले सँधै गर्न सक्ने कमै हुन्छ। र सबैमा लागू हुन्छ भन्ने पनि हुन्न।
'लामा लामा डकुमेन्ट्री हेरेर अघाएकाहरुलाई भोक जगाउने काम पनि हो' हलभित्र फिल्म हेर्दाहेर्दै एकजना दर्शकले आफ्नो विचार यसरी राखेका थिए। समयको महत्वलाई बुझ्दै, आफ्नो सृजनशीलतालाई एकआपसमा बाँड्ने, प्रतिक्रिया-सुझाब लेनदेन गर्ने र सृजनालाई निखार्ने र चलिआएको चलनभित्रै नयाँपन खोज्दै आफ्नो कार्यक्षमता देखाउने एउटा अभ्यासको रुपमा मैले यो फेष्टिभललाई लिए। यसको निरन्तरताको लागि थुप्रै कुराहरु हुनुपर्ने र तिनले थुप्रै पाटाहरु समेट्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने बाध्यता र खाँचो पनि छ। त्यसको बाबजुद निरन्तरताको अपेक्षा गर्ने लोभ भने जगाएको छ। हरेक experimental workको अविध छोटो भएकै जाती। र त्यस्ता केही रुचिकर र राम्रा परिक्षण कार्य पाकोपनतिर लम्केकै राम्रो।
Posted by कैलाश at 3:22 PM
दिदी मैले आफैले हेरे झै गरी लेख्नु भएछ साह्रै खुसी लाग्यो । हुनत तपाइको लेखाइ कुनमा पो कमि छ र तर पनि म यस विषयमा सुरुमा सचिन दाइ र रुख जीको मेल हेरेर नै अति नै एक्साइटेड थिए। १ मिनेटमा कस्तो र कसरी डकुमेन्ट्री बनाउलान भनेर अनि यी कुरा सुन्न साच्चै लालयित थिए तपाइको ब्लगबाट मेरो चाहाना पुरा गरी दिनु भो धेरै धेरै धन्यवाद। जे होस हाम्रा युवाहरुको नयाकाम गर्ने जोस देखेर साह्रै हर्सीत भए सलाम छ ती जोसीला र कर्मविर हातहरुलाइ सलाम छ ती नया सोचहरुलाइ पनि ।
Bhasker Kafle said...
ramro gagyo... yeti bistar ma lekhnu bhayeko chha
एक मिनेटको डकुमेन्ट्री भन्ने सुन्दा आश्चर्य लाग्यो | पक्कै पनि यस्ता सिर्जना धेरै मेहनेत गरिएका र खाँदिएका होलान...